သူ့အဖေချီထားရင်သဘောတွေကျနေတာဆိုပြီးအူတိုနေတဲ့ မေမေနန်းမြတ် – Askstyle
ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကိုတော့ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိလာခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေသိပ်မလုပ်တော့ပင်မဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ချစ်ခင်နေကြဆဲပါ။
ဂီတလောကမှာရော သရုပ်ဆောင်လောကမှာပါ ပရိသတ်ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းတစ်ယောက်ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်ပိုင်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကြောင့်အရမ်းကိုလှလာသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ခင်ပွန်းသည်တာတာမျိုးနဲ့အတူ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ မကြာခင်ကလည်း သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝလေးကို သားဦးလေးJack Jack ကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
သားဦးလေးဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဖက်အဖိုး၊အဖွားများအပြင် ခင်မင်သူများကပါ ချစ်မဝဖြစ်နေတာပါ။ Jack Jack လေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း မေမေနန်းမြတ်ကတင်ပေးလေ့ရှိပြီး အခုတစ်ခေါက်မှာလည်း “ သူ့အဖေချီရင် သဘောတွေကျနေတာ…. ဟွင်း မပြောချင်ဘူး ” ဆိုပြီး မနာလိုတဲ့ပုံလေးနဲ့သူမရဲ့Facebook mydayလေးမှာတင်ထားတာပါ။ပရိသတ်ကြီးလည်း Jack Jack ရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုအားပေးကြပါဦးနော်။
Photo – Nann Myat Phyo Thinn,CRD-Myanmar load
ဂီတလောကမှာရောသရုပျဆောငျလောကမှာပါပရိသတျခဈြခငျမှုကိုရရှိထားတဲနနျးမွတျဖွိုးသငျးတဈယောကျကတော့ အိမျထောငျပွုပွီးနောကျပိုငျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျရေးကွောငျ့အရမျးကိုလှလာသူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။သူမဟာခငျပှနျးသညျတာတာမြိုးနဲ့အတူကွညျနူးပြျောရှငျစရာကောငျးလှနျးတဲ့အိမျထောငျရေးကိုရရှိပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ မကွာခငျကလညျး သူမတို့နှဈယောကျရဲ့ဘဝလေးကို သားဦးလေးJack Jackကဝငျရောကျလာခဲ့ပါပွီ။
သားဦးလေးဖွဈတဲ့အတှကျ နှဈဖကျအဖိုး၊အဖှားမြားအပွငျ ခငျမငျသူမြားကပါ ခဈြမဝဖွဈနတောပါ။ Jack Jack လေးရဲ့ပုံရိပျလေးတှေ ဗီဒီယိုလေးတှကေိုလညျး မမေနေနျးမွတျကတငျပေးလရှေိ့ပွီး အခုတဈခေါကျမှာလညျး “ သူ့အဖခြေီရငျ သဘောတှကေနြတော…. ဟှငျး မပွောခငျြဘူး ” ဆိုပွီး မနာလိုတဲ့ပုံလေးနဲ့သူမရဲ့Facebook mydayလေးမှာတငျထားတာပါ။ပရိသတျကွီးလညျး Jack Jack ရဲ့ပုံရိပျလေးကိုအားပေးကွပါဦးနျော။